Vaovao - Gazety Hydraulika
tsena ao Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Yangtze River Delta, Pearl River Delta, izay matetika ampiasaina amin'ny fitsapana fantsona toy ny fantsom-by vy tsy misy fantsona, fantsom-by tsy misy fangarony, fantsom-boaloboka titanium, fantsom-barahina, fantsom-by aluminium. Ny fehezan-dalàna lehibe indrindra an'ny orinasanay dia ny famokarana gazety hydraulic mba hanomezana fitaovana fanandramana avo lenta sy avo lenta hamenoana ny banga eo amin'ny tsena. Ny press Press dia azo zaraina amin'ny karazany mandeha ho azy sy ny karazana tanana. Ny karazana manual dia afaka manandrana fantsona efatra indray mandeha, fa mila asa tanana. Ny fametrahana, ny famehezana, ny fametahana sy ny fanindriana dia mandeha ho azy. Ny halavan'ny fantsona dia azo ahitsy amin'ny 2-15m mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa fantsona tsy misy seam.
Karazana mandeha ho azy: fantsona iray ihany no azo zahana amin'ny fotoana iray. Ny fantsona dia miditra ao anaty talantalana, mandeha ho azy ny fikirakirana fitaovana, manasokajy ho azy, mametraka, manavanana, mametaka, mifatotra ary manindry mandeha ho azy; ny ampahan'ny rakotra ambany dia manasokajy ho azy ireo vokatra tena izy sy tsy misy kilema. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famokarana tena izy. Ny iray dia ny fitsitsiana vola, fa ny fitsitsiana ny asa ary ny fanatsarana ny taham-pivoarana ny fantsona.
Ny milina fanaovan-gazety novokarin'ny orinasantsika dia be mpampiasa amin'ny fanaraha-maso kalitaon'ny vokatra ireo mpanamboatra fantsona, ary fitaovana fikarohana sy fanapoahana ilaina amin'ny zava-dehibe sy lehibe. Ankehitriny dia namboarina soa aman-tsara: karazana tanana sy karazana mandeha ho azy. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha hifampiraharaha!